Badweyntimes.com » War FARXAD u ah Soomaalida laga Mamnuucay Mareykanka oo nasoo gaaray…Badweyntimes.com
War FARXAD u ah Soomaalida laga Mamnuucay Mareykanka oo nasoo gaaray…
Waxaa nasoo gaaray war ka farxiyay Soomaali badan kaasoo ah in la ogolaaday Soomaalida heysata Viisaha ama dal ku galka in ay gali karaan dalka Mareykanka iyadoo dhawaan donald -Trump 7-dal oo Soomaaliya ka mid tahay uu ka mamnuucay in ay dalkaasi galaan.
Xaakimka, James Robart, oo fadhigiisu yahay Seattle ayaa hakiyay dhaqangalka go’aankii fulineed ee Madaxweyne Trump, isagoo sheegay in xayiraadaha si degdeg ah loo qaadi karo, iyadoo dhanka kalena kiiska xagga sharciga la dhagaysanayo. Waxaa guud ahaan istaagay dalka Mareykanka dhaqangelinta xayiraadii uu dhowaan soo rogay maamulka cusub ee Donald Trump.
ilaa 60,000 Fiiso oo Mareykanku hore u bixiyay laguna joojiyay amarkii madaxweyne Donald Trump ayaa iminka dib u shaqeynaya, waxaana dadka heysta dal-ku-galka (fiisaha) Mareykanka ay hadda awood u leeyihiin inay tagaan dalka Mareykanka, iyagoo marka hore tegaya safaaradda Mareykanka ee Visaha bixisay.
Dadkaasi waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ku dhaqsadaan arrintan iyadoo xukuumadda Trump ay rafcaan ka qaadaneyso oo dooneyso in la soo celiyo xayiraadda, sidaasi darteed waxaa haboon in waqtiga ay ka faa’iideysan dadkaasi, waxayna farriintan ku socotaa dadka la siiyay fiisaha Mareykanka ee u xaryirmay amarkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Donald Trump.
Reer Muqdisho oo Saaka la yaaban qaab Cusub oo Amaanka Doorashada loo Adkeeyay…